अब नेपालमै मोबाइल निर्माण – Massive Khabar
Homeप्रमुख समाचारअब नेपालमै मोबाइल निर्माण
अब नेपालमै मोबाइल निर्माण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमै मोबाइल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । सरकारको ‘मेक इन नेपाल’ योजना अन्तर्गत नेपालमै मोबाइल सेट निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरी जिम्मा दिएको छ ।
‘यो मेक इन नेपाल अन्तर्गत सरकारका तर्फबाट प्राधिकरणले मोबाइल फोन उत्पादन तथा एसेम्बलको सम्भावना अध्ययन गर्न लागेको हो’,प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनो चन्द्र श्रेष्ठ भने, ‘नेपालमै मोबाइल उत्पादनको सम्भावना र रिफर्बिस्ड गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्ने तयारी भएको हो ।’
रिफर्बिस्ड अर्थात् पुराना स्मार्टफोनलाई विभिन्न कम्पनीले प्रमाणीकरण गरेर पुनः नयाँ जस्तै बनाएर बजारमा बेच्ने कार्य हो। त्यसका लागि प्राधिकरणले एभरेस्ट टेलिकम सर्कल प्रालिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार मोबाइल आयातलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले अध्ययन सुरु गरिएको हो । मोबाइल वर्षेनी करिब ५० आयात भइरहेको छ। पछिल्लो तीन वर्ष ९०७३, ०७४, ०७५० मा क्रमसः ५० लाख, ४८ लाख र ४५ लाखको हाराहारीमा मोबाइल सेट आयात भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा रञ्जनहरि कोइरालाले लेखेका छन् ।
किन गरिन्छ गाई, गोरु र गोवर्धन पूजा
नाति सहित सासूले अन्माइन् बुहारी
सावधान ! काठमाडौंमा बाटोमा हिडिरहेको युवतीलाई हेपाटाइटिस र एचआइभीको सिरिन्ज आक्रमण, चारजना युवतीको उपचार गरिरहेका चिकित्सकले दिए यस्तो सुझाव ! (भिडियो हेर्नुस्)
‘प्रेम नहुने ठाउँमा जीवन नै हुँदैन’ !
कालापानीसहितको नक्शा पढाउन शिक्षामन्त्रीको आग्रह !
वि’नाशर्त कुनै विदेशी सहयोग स्वीकार गर्न हुँदैनः बिजुक्छेँ !
विश्व बैंकले गर्यो कुलमान घिसिङको प्रसंशाः नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भएको प्रगति संसारमै गर्व गर्न लायक !
कोरोना भाइरसबाट बचाउन कोरियामा रहेका नेपालीको सुरक्षा सतर्कताका लागि काँग्रेसको अपिल !